Naghachi Losr ma ọ bụ ehichapụ Photos si Cell Phone
> Resource> Naghachi> Cell Phone Photo Recovery: Naghachi Losr ma ọ bụ ehichapụ Photos si Cell Phone
Olee otú Naghachi Lost Photos si Cell Phone
Naa, ekwentị bụ kwesịrị ná ndụ kwa ụbọchị, ma ọ bụ ihe karịrị nanị a nkwurịta okwu ngwá ọrụ. Ekwentị anọwo n'ụzọ dị ukwuu na-eji dị ka obere mkpanaaka ntụrụndụ center nakwa dị ka a nchekwa na ngwaọrụ. Anyị na-dị oké ọnụ ahịa foto na-eme ka videos na ya. Otú ọ dị, i nwere ike ka na-hapụ gị foto site na cell ekwentị ruru ọtụtụ ihe mere: mberede nhichapụ, formatting ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa mmebi na kaadị ekwentị.
N'ezie, nchekwa ngwaọrụ na-akasị ji na ekwe ntị na-MicroSD kaadị, TranshFlash kaadị, MiniSD kaadị na ọtụtụ ndị ọzọ ndị ọzọ kaadị. A-atọ ndị ọzọ software nwere ike inyere ke agbake furu efu data si nchekwa na ngwaọrụ na ekwentị. Wondershare Photo Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac nwere ike ịbụ gị ezi nhọrọ ịrụ ekwentị data mgbake.
Ị nwere ike ibudata free ikpe mbipute nke Wondershare Photo Recovery na mgbe ahụ na-amalite ekwentị foto mgbake.
Jikere Naghachi Photos si Cell Phone
1 kwụsị iji ekwentị gị mgbe ị na-photos furu.
2 Gbaa mbọ hụ na ekwentị gị ma ọ bụ na kaadị ekwentị nwere ike jikọọ kọmputa.
3. Jide n'aka gị na ekwentị na-akwado site na anyị usoro.
Nzọụkwụ na Igosi Cell Phone Photo Recovery
Nzọụkwụ 1 Lee, anyị na-Wondershare Photo Recovery (Windows version) dị ka a na-agbalị. Jikọọ gị SD kaadị na kọmputa na-agba ọsọ usoro ihe omume. Pịa "Malite" na ala nri akuku nke interface.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, biko ibudata Mac version nke Cell Phone Photo Recovery.
Nzọụkwụ 2 N'oge na-adịghị ị ga-enweta ihe interface dị ka oyiyi egosiputa n'okpuru. Ebe a discs na mpụga SD kaadị na kọmputa gị niile ga-depụtara. Ị dị nnọọ mkpa họrọ gị SD kaadị wee pịa "iṅomi" ịchọ furu efu faịlụ.
Nzọụkwụ 3 Ozugbo Doppler risịrị, ị nwere ike họrọ faịlụ na ị chọrọ iji naghachi. Michael hụrụ photos dị. Ị nwere ike ịlele ma ndị bụ faịlụ mkpa ka ị naghachi ma ọ bụ. Ọ bụrụ na ha, pịa "Naghachi" naghachi ekwentị foto na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Key atụmatụ nke Wondershare Photo Recovery:
Wondershare Photo Recovery Bụ ike naghachi photos, videos na music na ị na-efu si ekwentị Iji hụ na ị nwere ike naghachi furu efu foto site na cell ekwentị ịga nke ọma, biko setịpụrụ ọzọ nchekwa kama mbụ otu zọpụta ndị natara photos.
1 n'Ezie elu na-agba na-agbake faịlụ.
2 Easy-eji software. Ị nwere ike mfe naghachi photos, music ma ọ bụ vidiyo na ị chere na e ruo mgbe ebighị ebi.
3 A oké ego nke SD kaadị ke ekwentị akwado: Obere SD kaadị, Micro SD kaadị, SDHC kaadị, na MMC kaadị.
4 Maka agbake faịlụ site na igwefoto dijitalụ, uka nchekwa ngwaọrụ na esịtidem ike mbanye.